FAQs - Tangshan Jidong Mechanical uye Electrical Equipment Co, Ltd.
Dhirivhari misiyano inosiyana zvichienderana nechigadzirwa, Kazhinji pakati muchitoro nemazuva zana nemakumi masere.Kune kugadzirwa kwakawanda, inguva yekutungamira mazuva 20-30 mushure mekugamuchira mubhadharo wedhipoiti. Nguva dzekutungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana yedu yekutungamira nguva isingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuzviita.
Mitero yekubhadhara ichakurukurwa maererano nezvakasiyana zvigadzirwa uye huwandu hwebvumirano.